आइओएमको स्वागतयोग्य निर्णय – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आइओएमको स्वागतयोग्य निर्णय
२०७१ चैत्र ७, शनिबार ०३:२४ गते
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ । आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको बैठकले प्राज्ञिक तथा भौतिक क्षमता नभएको औँल्याउँदै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै स्वागतयोग्य निर्णय गरेको हो । बोर्डको यस निर्णयबाट वैधानिक बाटोबाट सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बन्द भएको छ । मेडिकल माफियाको प्रभावमा भटाभट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रवृत्ति बढेपछि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चोरबाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्ने माग राखेर आमरण अनशन बसेका थिए । डा. केसीको अनशनपश्चात् सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको थियो । सरकारको पटकपटकको दबाबपछि आइओएम फ्याकल्टीको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । क्षमताबिनै मेडिकल कलेज थपिँदा स्तरीयभन्दा संख्यात्मक रुपमा चिकित्सक उत्पादन हुने सम्भावना रहेको थियो ।
बोर्ड बैठकले २०६८ वैशाखमा क्षमता नभएका कारण देखाउँदै सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि २०७० कात्तिकमा चोरबाटोबाट प्रक्रिया थालनी गर्न दबाब आएपछि तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा. प्रकाश सायमीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्रिवि पदाधिकारीले बोर्डको निर्णयविरूद्ध मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, नेसनल मेडिकल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजसहित आठ कलेजलाई सम्बोधन खुला गर्न चोरबाटो अवलम्बन गर्दै आएका थिए । नयाँ आठ अस्पताललाई सम्बन्धन दिन तीव्र दबाब झेल्नुपरे पनि आइओएमले आफ्नो अडान कायम गरेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो क्षमतामा विश्वास गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि खुसीको विषय हो । सरसर्ती हेर्दा नयाँ मेडिकल कलेज थपिँदा जनशक्ति पनि बढ्छ, तर गलत मनसाय र आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित भएर जथाभावी रुपमा कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
स्तरीय र प्राज्ञिक चिकित्सक उत्पादन गर्न सरकारले सर्वप्रथम सम्बन्धनप्राप्त विश्वविद्यालयको क्षमता बढाउनुपर्छ । तर, कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन दिँदा नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धराशायीमात्र हुनेछैन, स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण हाबी हुन जान्छ । जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा दक्ष चिकित्सकभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने भीड उत्पादन हुनु स्वाभाविकै हो । घाँटी दुखेर अस्पताल भर्ना भएकी महिलाकोे पाठेघरको शल्यक्रिया गरिनु, टाउको दुखेका बिरामीको पेटको उपचार गरिनु त्यसैको परिणति हो । आइओएमले गरेको पछिल्लो निर्णयले मेडिकल माफियालाई नराम्रोसँग झट्का दिएर संस्थाको हित हुने काम गरेको छ । बोर्डको निर्णयविपरीत जुनसुकै बेला त्रिवि पदाधिकारीले चोरबाटोबाट सम्बन्धनका लागि चलखेल गर्ने सम्भावना भने कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राज्ञिक र क्षमतालाई आत्मसात् गर्ने हरेक क्षेत्रबाट निरन्तर दबाब र खवरदारी गर्नु जरूरी देखिएको छ ।